Ukugqugquzelwa Kwimpilo Engcono Nempilo Ngaphezulu (sisungula imakethe yabesifazane)
Izindwangu Zokunikeza Okunikeza Imigwaqo Eselula Okwakha ngaphakathi Wake wakuncela esiswini sakho ngaphambili futhi kwadingeka ukuthi ubambe? Izingubo zokuma zinganikeza lowo mbono osheshayo wokuthambisa ngaphandle kokuhlupheka ngokumunca esiswini sakho. Isizathu ukuthi i-shapewear empeleni ilingisa umphumela wokuncela ...
Kufanele ube nabesifazane bezingubo zezingubo zesifazane
Izingubo zanamuhla namuhla zikude kakhulu nezingubo omama bethu ababevame ukugqoka. Kulezi zinsuku ziyagqokwa futhi zigubha izinkanyezi eziningi kanye nama-celebs futhi kufanele kube yizo zonke izembatho.kodwa kungani? Kungani sigqoka ukwakheka? Ukubheka okwenziwe ngokweqile: Noma ngabe kuyiphathi, ukugqoka okujwayelekile noma okuhlanganisiwe, okokugqoka okwedlule ...
Ngabe i-adhesive bra isebenza kanjani
ngu admin ngo 20-03-31
Uma ungathandi ukukhawulelwa lapho usebenzisa ama-bras ejwayelekile, Izingubo zakho ziya ngokuya zilinganiselwe, imichilo ivele ngaphandle kusuka phezulu futhi noma ngabe iboshwe ngokucophelela ngemuva, uhlala wazi ukuthi ziyawa noma zisuka endaweni. Futhi, ibhendi eqinile noma i-underwire ingakushiya ngemivimbo ejulile. ...